म सुरक्षित नै छु तर म मा.थि प्रहरीले नि,गरानी ब.ढाएको छ । मेरो सुरक्षाको कामना गर्नुहोला डा.गोबिन्द केसि
काठमाडौं । स्वा,स्थ्य क्षे,त्रमा भएका वि,कृतीको सु,धार गर्न सरकार सँग मा,ग गर्दै प,टक-पटक आ,मरण अ,न्सन् बस्ने डा. गोविन्द केसी अ,हिले क,र्णाली प्र,देशका दु,रद,राजका ग,रिव र अ,सहाय जनताको निशु!ल्क स्वास्थ्य उ!पचारमा ख,टिरहेका छन् ।
यसै क्र,ममा आज जुम्लामा पु,ग्दा प्र,हरी प्र,शासनले अ,पमान, द,मन र दा,दागि!री गरेको आफ्नो फेस,बुक पे,जमा स्टा,टस लेखेर जानकारी गराएका छन् । उनले स्टा,टसमा भनेका छन्, ग,रीब, दुखी र बि,कट ठाउँमा नि,शुल्क उ,पचार गर्न देशको कु,ना क,न्दरा पुग्ने क्र!ममा आज जुम्लामा पुग्दा प्रहरी प्र,शासनले अ,पमा,न, द,मन र दा!,दा!गिरी गरेको छ । म सु,रक्षित नै छु, तर म मा,थि प्रहरीले नि,गरा,नी ब!ढाएको छ । मेरो सु,र.क्षाको का.मना गर्नुहोला !
प्रह,रीको एक हु,ल आ,एर उन!लाई ध,म्क्या,इरहेको भि,डियो र फो,टो अहिले सा,माजिक सं,जालमा भाइ,रल भएका छन् । सा,थै दु,खी, गरि,व र नि,मुखाहरुको से!वा गर्न पनि न!दि,ने स,रकार र प्र,हरी प्र,शासन कस,का ला,गी हो भनि व्या,प,क आ,लोचना पनि भइxरहेको छ ।
डा. गोविन्द केसीको स्टा,टस: